AKHRISO: Qodobo Hordhac ah oo kasoo baxaya Kulanka Muqdisho & Xogaha laga helayo.
MUQDISHO(P-TIMES) – Hoggaamiyayaasha dawladda Faderaalka Soomaaliya, Dawlad gobaleedyada & Gobalka Benaadir ayaa kulamo siyaasadeed ku leh caasumada Soomaaliya, waxay uga wada hadlayaan arrimaha siyaasadda ee hadda taagan, gaar ahaana doorashooyinka loo madlan yahay marka la gaaro bisha November 2020-ka oo mudo xileedka Hay’addaha baarlamaanka uu ku e’eg yahay.
Madaxda ayaa kulamadoodu uga socdaan Aqalka Madaxtooyada Faderalka, waxayna shalay dib u dhigeen kulamadooda oo ay latashiyo kala duwan ugu laabteen xubnaha wafuuda ee lasocday, markii ay 2 maalmood dood ka lahaayeen qodobada qaarkood.
Dawlad gobaleedyada qaarkood, waxay doonayaan in wax ka bedel lagu smeeyo hanaankii doorasho ee lagu garay Dhuusa-Mareeb, halka qaarkoodna ay kasoo horjeedaan oo ay doonayaan in kaas uun lagu dhaqmo.
Warar madax banaan, lagana helay ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in dhinacyadu ay doonayaan in wax kabedelka Dhuusa-Mareeb3 qodobada u baahan tafsiirka dheeraadka ah waqti lasiiyo.
1. Arrinta Maamulida Doorashada, dawlad gobaleedyada qaarkood waxay soo jeediyeen in lagu darro Guddi hoosaad kala shaqeeya Deegaan doorashada.
2. Tiradda Ergada codka-bixinaysa laga shigo 150ergay, oo xulida ay Odayaashu yeelanayaan, Xisbiyadana meesha laga saaro.
3. Deegaan doorashooyinka ugu badnaan dawlas gobaleed kasta laga dhigo 2 xarumood, oo isku maalin ay ka dhacayso.
4. In waqtiga go’aan laga gaaro.
Dood cusub ayaa hareyn doonta kulamada oo ah arrinta gobalka Benaadir, kuraasta Haweenka iyo arrimaha ku gadaaman doorashooyinka, iyadoo uu shalay madaxweynaha Galmudug hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay arrintan.